संखुवासभा घटना : घटनास्थलमा प्रहरी, दुई बच्चासहित ६ को कस्ले लियो ज्या’न ? – Kavrepati
Home / समाचार / संखुवासभा घटना : घटनास्थलमा प्रहरी, दुई बच्चासहित ६ को कस्ले लियो ज्या’न ?
admin September 6, 2021	समाचार Leaveacomment 209 Views
घटनाको थप विवरण आइसकेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख डिएसपी लालध्वज सुवेदीको टोली घटनास्थल मादीतर्फ लागेको छ। सुवेदीले मादी प्रहरी चौकीबाट पनि टोली घटनास्थलतर्फ गइसकेको जानकारी दिएका छन्। ‘हामीले घटनास्थललाई नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ’, उनले भने, ‘म पनि त्यसतर्फ जाँदैछु।’ फाइल तस्विर
Previous गृहमन्त्रीले छोरी बनाएको बालिकालाई वडाध्यक्ष र उनका छोराले..?
Next फेरी थपियो निषेधाज्ञा, भदौ ३१ गते राति १२ बजेसम्म लागु हुने गरि थपिए नयाँ नियम